About – 2kalluunka
2fish.co waa shirkad ka mid ah ragga iyo dumarka, oo ay ka mid ah wadaaddada Catholic yar, dedicated to defending and explaining the Catholic faith–gaar ahaan iimaanka Roman Catholic–iyada oo sabab iyo run.
Dhamaan waa la soo dhaweynayaa in ay baadhaan goobta iyo akhriyo farriinta Ilaah iyo fasiraada naga. Waxaad sidoo kale waa lagu soo dhaweynayaa in ay soo gudbiyaan su'aalo ah ee aannu ku “Weydii Wadaadka ah” page ama in ay soo gudbiyaan jecel a khudbadiisa. Waxaan soo bandhigi doonnaa jawaabahoodii iyo aqbalo content sida ugu dhaqsaha badan, laakiin waxaan nahay urur iskaa wax u qabso ah, iyo xubin kasta uu leeyahay (ugu yaraan) shaqo mid ka mid waqti-buuxa ah.
Ilaa inta ay suurtagalka, warkayagii waa soo dhawayn iyo ecumenical, oo aan weligood ku gacangelinaysaa caqiidada dhexe ee soo galaya. Waa isku mid ka badan kala duwan wayse iskhilaafeen Christian kala duwan, iyo halka aan u dabaal isaga mid yihiin kuwa, waxaan sidoo kale kuu sharxi doonaa sababta aan rumaysan nahay waxa aannu ku samayn iyo dhaqanka sida aan.
Waxaan rajaynaynaa in wada sameyso cad, Ingiriisi fudud.
Waxaan u doortay magaca “2kalluunka” sababta oo ah macnaha double.
First, sida Miracle oo ka mid ah (laba) Fish oo (shan) Kibsood oo u muuqata mid kasta oo ka mid ah afarta Injiil, waxaan rabnaa in aan saameyn dad badan intii aan la ilaha aad u yar awooddo. Sidaas, sida Springsteen gabyaa, “Waxaan countin’ on mucjiso ah.”
Labaad, xagga aan rasmi ahayn (ilaa intii suurtagal ah), positive, loo dhan yahay (iyo, rajeynayaa, Waxyoon) fariin, waxaan rajaynaynaa in ay qabtaan kalluun yar, aad. Nala soo xiriir Wixii macluumaad dheeraad ah.